I-Ciudad Villa: Ipuli Yabucala Yakho! - I-Airbnb
I-Ciudad Villa: Ipuli Yabucala Yakho!
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguCiudad
Nokuba ufuna indawo yabucala yokwakha iqela, ipati ngexesha elikhethekileyo okanye ukudibana nosapho/iofisi elula, le ndawo yeyakho!
Le ndlu inamachibi abucala, ikhitshi eliphandle, iveranda, amagumbi okulala kunye nendawo yeenkqubo, indawo yokuphumla kunye nepati yokubraya! Sineenkonzo ze-paluto xa uzidinga (xa ifumaneka).
Qhubeka ufunda ukuze ubone iinkcukacha ezipheleleyo zexabiso lendawo yokuhlala!
15Mins ukusuka kwi-SM
kweLa Mesa Dam Ngaphambi kwe-San Jose Del Monte
Indawo engaphezu kwe-500 sqm yemicimbi enabantu abambalwa. Yonke into oyibonayo kwiifoto ikhethekile kuwe ngexesha lokuhlala kwakho. Azikho ezinye iindwendwe ezamkelwayo xa ubhukisha indlu yethu enendawo yokuphola ezimeleyo enezinto zayo ezinokusetyenziswa.
Ngeli xabiso, sinikezela ngamagumbi okulala ayi-2 anomoya opholileyo anokuhlala abantu abayi-12 okanye abayi-16 ngokukhululekileyo. Oomatrasi bayafumaneka kwiqela elikhulu.
* * Phucula ukuya kumagumbi okulala ayi-3 anomoya opholileyo ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi-22
* * Faka iPenthouse Family Suite yethu ukuze ufumane ezinye iindwendwe eziyi-10 ukuba ufuna indawo engakumbi okanye ufuna ukuhlala kamnandi.
* * Nceda usithumelele umyalezo ngaphambi kokubhukisha ezi ndlela
* * Ikhitshi linefriji, i-microwave oven, isitovu kunye nesixhobo sokufaka amanzi asimahla. Okanye sithumelele umyalezo kwiNkonzo yethu yasePaluto (xa ifumaneka).
Faka Iphakheji yethu Yokuzonwabisa kunye neeBilliards ezingenamida, iDarts kunye nokusetyenziswa kweNipa House ngeP2,000 kuphela!
Kukho I-WIFI yasimahla - kodwa nceda uqaphele ukuba nayiphi na i-intanethi ehamba kancinci okanye engatshintshekiyo, kuquka isignali yefowuni ingaphaya KWAMANDLA ETHU. Oku kuxhomekeke kuphela kubaboneleli ngeenkonzo baloo ndawo.
Ii-CCTV ezingqonge indawo/iindawo ezisetyenziswa ngumntu wonke nazo zifakiwe ukuze ukhuseleke.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, 1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
I-HDTV ene-I-HBO Max, I-Netflix
4.77 · Izimvo eziyi-304
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi304
Ukwahlulwa kwabucala kwizitrato ezibanzi kunye negeyithi egciniweyo.
* * * UHLAZIYO
* * * Ukungena ngeColinas Verdes. Nceda usithumelele zonke iinombolo zakho zepleyiti yemoto ukuze sikhusele ukudlula kwegeyithi.
Ukusuka kwi-SM Fairview, khwela i-jeep okanye ibhasi enophawu oluthi "Tungko", okanye uhambe "ePangarap".
Emva koko khwela i-tricycle eorenji eya kwi-Ciudad Real Subd. Ukusuka apho, unokukhetha ukuhamba (malunga ne-5mins) okanye uqhube enye i-tricycle ukuya kwi-Ciudad Villa.
Umbuki zindwendwe ngu- Ciudad
We are a family owned group of property venues.
Siza kukwamkela xa ubhalisela ukufika. Abakhathaleli bethu abanobubele baza kukunika inkcazelo emfutshane ngale ndawo nemithetho yekhaya. Baza kuma de kube ngu-11pm ukukunceda ngeemfuno zakho. Zive ukhululekile ukusazisa ukuba kukho into oyifunayo.
Siza kukwamkela xa ubhalisela ukufika. Abakhathaleli bethu abanobubele baza kukunika inkcazelo emfutshane ngale ndawo nemithetho yekhaya. Baza kuma de kube ngu-11pm ukukunceda ngee…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Caloocan